Top 10 Android nidaameed Maareeyayaasha si hagaagsan wax kasta oo Android Phone / Tablet
1.6 Manager Android Music
1.7 Manager File Android
1.8 Manager Android nidaameed
1.9 Manager Android Data
2.0 Manager Android Podcast
2.1 Manager Android WiFi
2.2 Manager Android Bluetooth
2.3 Manager Password Android
2.4 Manager ah Barzakh, Android
2.5 Manager Kharashka Android
2.6 Manager Android Audio
2.7 Manager Android Audio
2.8 Manager Android Battery
2.9 Manager Android Task
3.0 Manager Android xawaaladaha
3.1 Manager Android Window
3.3 Manager Android Call
3.4 Manager Android Root
3.5 Manager Ogeysiinta Android
3.6 Manager Android Memory
3.7 Manager Android Desktop
3.8 Manager Android Update
Tababare Kaydinta Android 3.9
4.0 Manager Android Project
Haddii aad tahay qof user ah Android iyo akhriska qoraalada ku saabsan this site, tahay u badan tahay in uu yahay qofka casriga ah ku wajahan aad. In aad nolol maalmeedka, aad ula xiriira taleefanka Android ama kiniin ah, kaydinta xogta ugu muhiimsan ee ay ka mid yihiin xiriirada, emails, waraaqaha, music, sawirada, videos iwm dhibaatooyin bilowga dhisayaa marka aad bedesheen Android hore telefoonka ama kiniin in mid cusub, ama marka aad rabto in aad u hagaagsan qaar ka mid ah files muhiim ah in aad telefoonka Android ama kiniin. Wax kasta oo sababaha ka dhigi aad rabto in aad u hagaagsan phone Android ama kiniin ah, waxaa jira hab baxay. In this article, waxaan doonayaa inaan tuso waxaad 10ka qalab tababare u hagaagsan Android aad u.
Qaybta 1. Top 5 Android Manager nidaameed u PC Qaybta 2. Top 5 nidaameed Manager Apps u Android Qaybta 3. nidaameed Accounts on Your Phone Android oo Tablet
Qaybta 1. Maareeyaha nidaameed Top 5 Android u PC
Halkan kiniin ah Top 5 desktop software ee syncing qalab Android si aad u your computer. Qaar ka mid ah software waxay u baahan xiriir Wi-Fi, qaar ka mid shaqeyn karaan via cable USB. Hubi oo ka mid kugu haboon ugu!
WiFi Manager Android nidaameed 17,74 MB Free Windows
Wondershare Kuu soo tababare u hagaagsan awood Android magacaabay MobileGo for Android (Windows) ama MobileGo for Android Pro (Mac) si hagaagsan xiriirada, barnaamijyadooda, music, sawiro, videos oo dheeraad ah oo u dhexeeya qalabka Android iyo computer iyadoo la isticmaalayo cable USB ah. Sidaa daraadeed, aad easilyUsing kartaa software, waxaad gali kartaa oo kala soo bixi nooc kasta oo xog iyo sidoo kale maamuli lahayd codsiyada. Waxaad ku rakiban kartaa ama ka saar barnaamijyadooda, SMS diri, wareejin files of qaabab oo dhan iyo badbaadin gurmad ah xogta telefoonka aad on your computer.
The version Windows aad u saamaxaaya in ay isticmaalaan software taliya WiFi.
Gurmad The dhamaystiran waxaa la samayn karaa iyadoo click hal.
Wax weyn ayay u music, sawir iyo video caashaqi jiray si ay u gudbiyaan files iyo ka qalab Android.
Waxaad heli kartaa oo si toos ah u diri fariimaha qoraalka ah ka computer.
Ku rakib, uninstall, iyo dhoofinta barnaamijyadooda Android ku yaalla.
Import iyo dhoofinta xiriirada iyo ka phone Android aan ka kaaftoomi kasta.
Dalab maxkamad waa lacag la'aan ah kaliya 15 maalmood. (Waxay bixisaa muuqaalada buuxa idiin).
doubleTwist waa tababare u hagaagsan weyn android daaqado iyo Mac. Waxaad u hagaagsan kartaa music ka computer si aad telefoon Android ama kiniin ah ee SNAP ah. Sida Lugood u Mac, waxaa jira this software doubleTwist u Android. Waad haysan kartaa ururinta music oo dhan abaabulan, waxaa dib ilaa on your computer, subscribe to podcasts iyo xitaa in ay dhagaystaan ​​ku nool radio. Waxa kale oo ay syncs video iyo sawiro. Waxay leedahay interface aad u cad oo dareen leh. Waxaad u baahan doontaa in aad kala soo bixi doubleTwist u music u hagaagsan, video iyo sawiro dhexeeya Android phone ama kiniin iyo computer ka badan WiFi ama cable USB.
Music Easy, sawir iyo video syncing qalab u dhexeeya Android iyo PC.
2. badan muuqaalada smart sida radio hoorto, aragtida cover-socodka iyo buugga podcast.
Artist khuseeya iyo macluumaad album aan lala guud ahaan internetka.
3. Manager Android nidaameed Wi-Fi
Tababare Android nidaameed Wi-Fi waxaa kuu keenay by Mobile Action. Software aad u baahan tahay inaad kala soo baxdo macmiilka aad kombuutarka iyo app ah Android ku saabsan telefoonka. Ka dib markii in, xogta la wirelessly beehsa karaa Wi-Fi marka aad ku xiran shabakada iyadoo lagu eegayo Xeerka QR ah. Waxaad waafajinta karo oo dhan la xiriir, fariimaha, sawiro, video, jadwalka taariikhda, music, codsiyada iwm
.Wadashaqayntaas Quick oo gurmad hab.
Waxa ay u ogolaataa syncing xogta ku bixisaa shabakad wireless.
Waxa aanu khatar xannibaad kasta oo ku qaabab file u gaar ah.
Interface waa mid waxoogaa lagu dhakafaarayo oo aan aad u dareen leh.
Updates New aan diyaar u ah software ah.
SyncDroid waa software wanaagsan u hagaagsan xogta aad muhiim u dhexeeya shakhsi qalab Android iyo computer. The files waxa syncs ka mid ah xiriirada, SMS, sawiro, videos, Bookmarks browser, wac taariikhda iwm Habka u hagaagsan waxaa loo sameeyaa iyada oo cable USB, si aad u leeyihiin in ay awood hab debugging USB sidaa u samaysay.
Waxaa habboon in la isticmaalo. SyncDroid ogaadaa aad telefoon oo si toos ah u rakibtay codsiga telefoonka.
Waxaa syncs files via gurmad xogta iyo geedi socodka dib u soo celinta.
Waxaa la socon kara ku dhowaad dhammaan versions Android bilaabo Android 2.3 in 4.4.
Waxaa oo dhan Bookmarks browser aan gurmad kartaan oo taageeray oo kaliya Bookmarks ee Android browser caadiga ah.
Ayaa si toos ah gurmad jadwalka ma aha had iyo gabi ahaanba wax ku ool ah oo soo baxday in ay waxoogaa dhibaato waqtiyada.
SyncMate waa software Mac kaas oo u ogolaanaya u hagaagsan xogta dagdag ah oo gurmad ah ka Android in aad Mac. Waxay leedahay interface aad u fiican oo aad u fududahay in la isticmaalo. Waxaa u hagaagsan karo xiriirada, jadwalka, sawiro, videos, waraaqaha, fariimaha qoraalka ah iwm By isticmaalaya cinwaanka IP qalab Android aad ka.
Noocyada kala duwan ee fursadaha u hagaagsan.
Dhibaatooyin Yar arbushin ilaa mararka qaarkood.
Qaybta 2. Top 5 nidaameed Manager Apps u Android
Marka laga reebo desktop tababaraha u hagaagsan Android u Mac iyo Windows, kuwaas oo sidoo kale qaar ka mid ah Apps Android weyn ee dukaanka Google Play, oo waafajinta karo oo dhan xog muhiim ah, iyaga gadaal ilaa iyo iyaga soo celin haddii xaalad deg deg ah. Fiiri miiska iyo dooran aad qaado!
Tababare nidaameed 641 KB Free
Side nidaameed 3.0 10 MB Free
Message nidaameed 84 KB Free
CalDAV-nidaameed 1.1 MB $2.86
1. nidaameed Manager
Nidaameed Manager for Android waxaa kuu keenay by Acarasoft. Tani waa macmiilka WebDav ah. Isticmaalka app this, waxa aad maamuli kartaa saamiyo WebDav, download iyo geliyaan files iyo abaabulo files of qaabab oo dhan. The servers taageeray waa GMX MediaCenter, waxay qiimey 6, 7 iyo 8 u Windows Server 2003, Windows 7 iyo Windows 8 siday u kala horreeyaan.
Adeeg syncing file Easy.
Badan dib u eegista xun.
Negeria halka syncing.
Mararka qaarkood waxay qaadataa waqti dheer si ay u hagaagsan badan syncing buuggan.
Ka Google Play Store Download Manager nidaameed >>
2. Folder nidaameed Lite
FolderSync waa codsi wanaagsan syncing xogta si aad u adeega kaydinta daruur ku salaysan. Waxa ay taageertaa servers kaydinta daruur kala duwan oo ay ku jiraan DropBox, OneDrive, SugarSync, BitCasa, Google Docs iwm habka syncing file waa effortless oo dhan aad music muhiim ah, sawirada iyo waraaqaha la isla gelin doonaa in daruurtii ka phone kaydinta.
Waxa ay u ogolaataa xogta koombiyuutarka in tiro badan oo ah server kaydinta daruur.
Aad iyo fududahay in la isticmaalo iyo qaab lagu qanci karo.
Mararka qaarkood syncing xogta laga fariisiyo.
Waxa aanu taageeraan qaraarada u dhamaan noocyada qalabka.
Download Folder nidaameed Lite ka Google Play Store >>
3. Side nidaameed 3.0
SideSync waa adeeg u hagaagsan xogta la yaab leh la jaan qaada kiniiniyada Samsung Galaxy iyo casriga ah. Waxay kuu ogolaanaysaa inaad si ay u wadaagaan xogta, shaashadaha iyo daaqadaha si qalab kale oo xitaa PC. Isticmaalka SideSync 3.0, in aad aad PC tuuray kartaa screen qalab Android, Kuna wareejiyo nooc kasta oo xogta ay soo jiiday, oo kala go'in. Waxa ugu fiican ee ku saabsan SideSync waa in loo qoondeeyey kooxda cilmi-baarista iyo horumarinta ee Samsung ah, oo ka kooban app horumarinta iyo injineerada fasalka ugu sareeya.
Waxa ay u ogolaataa ridaya bandhigay qalab si bandhigay PC.
USB iyo isku xirnaanta Wi-Fi Labada taageeray.
Waxa ay taageertaa keyboard iyo mouse qaybsiga.
Waxa kaliya ee la shaqeeya qalabka Samsung Galaxy.
Ma ahan la jaan ugu dambeeyay ee Samsung Galaxy Tab S.
Download SideSync 3.0 ka Google Play Store >>
4. Message nidaameed
Inkasta oo inta badan ay adeegyada u hagaagsan Android qabtaa shaqooyin kala duwan, mid gaar caawisaa waafajinta fariimaha qoraalka ah oo keliya. Waxaa jira in badan oo barnaamijyadooda kala duwan ee syncing fariimaha qoraalka ah, laakiin waa mid aad u fog hab ugu sahlay inay qaab hufan u-adeegiddan u hagaagsan fariin. Dhammaan MMS aad u qiimo badan oo SMS si fudud loo taageeray karaa oo dib loo soo celiyo iyadoo la isticmaalayo app Message nidaameed u Android. Waxa kale oo aad soo dhoofsadaan karo SMS ka dhoofinta XML ee app MyPhoneExplorer.
Gurmad Easy iyo soo celinta geedi MMS oo SMS.
Howlan doorasho overwrites file hore oo si qalad ah ay tirtirto laga yaabaa in fariimaha oo dhan.
Download Message nidaameed ka Google Play Store >>
Kanu waa macmiil CalDav kaas oo u ogolaanaya dadka isticmaala Android waafajinta dhacdooyin taariikheed iyo hawlaha. Waxaa u shaqeeya sida adabtarada ah u hagaagsan iyo dhammaataan isku codsiga stock jadwalka. Waxa ay taageertaa hawlaha, shahaadooyinka is-saxiixay, tiro badan oo ka mid ah xisaab CalDav, auto provisioning, .Wadashaqayntaas jadwalka si toos ah, ICS webcal cunaa iwm Lifaaq waxaa taageera Android 4.1 iyo wax ka sareeya.
Taageerada tiro badan oo ah server CalDav-nidaameed ay ka mid yihiin DAViCal, Zimbra, iCloud, ownCloud, SOGo iwm
Waxay leedahay user interface saaxiibtinimo iyo qaab siman.
Waxa aanu taageeraan sii daayay Android version ugu dambeeyey - KitKat.
Download CalDav-nidaameed ka Google Play Store >>
Qaybta 3. nidaameed Accounts On Your Android Phone
Mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu badan oo aad la kulmi halka bedesheen qalabka ama ka dib markii dib warshad ee telefoonka la syncing xisaabta Android ama Google. Aan hubi Hanuuniye tallaabo-tallaabo ku saabsan sida aad u samayn kartaa telefoonka aad Android, iyadoo aan loo eegin in aad Android version.
Tallaabada 1. Tag Settings menu ah ee aad taleefan Android ama kiniin. Waxaa laga heli karaa Bar Ogeysiinta ama khaanadda App ah.
Tallaabada 2. Raadi Accounts & nidaameed ikhtiyaarka ama kaliya Accounts doorasho ee menu Settings ah.
Tallaabada 3. iyo dooro ikhtiyaarka Account ku dar.
Tallaabada 4. Dooro adeegga aad doonayso in aad ku darto xisaab. Waxaa laga yaabaa Facebook, WordPress, Gmail, Evernote iwm Si kastaba ha ahaatee, haddii aad u doonayaa inaan u hagaagsan xisaabtaada Android, waxaad u baahan tahay in ay doortaan Google.
Tallaabada 5. lagu weydiiyo in aad doontid username iyo password.
Tallaabada 6. Ka dib markii in, Wizard nidaameed ee kugu hagi doona geeddi-socodka syncing waxyaabaha gaarka ah ee aad Account Android.
Step7. Waxa kale oo aad u hagaagsan karaan cinwaano dhowr Google oo siinaya macluumaad account soo socda la mid ah tallaabooyinka kor ku xusan.
Waxaa jira boqolaal adeegyada syncing xogta la heli karo Android, laakiin dhammaantiin ma aha iyaga bixiyaan khibrad user ugu fiican. Iyada oo ku xidhan baahidaada, waxaad u baahan kartaa software khaas ah ama codsiga syncing qalab Android aad. Waxaan samaynay Kala soocida aad u soo bixiyeen kuwa ugu fiican oo ku saleysan muuqaalada iyo user-celin.
> Resource > Android > Top 10 Android nidaameed Maareeyayaasha si hagaagsan wax kasta oo Device Android